Adeegyada Taageerada - Machadka Waxbarashada Laba-luqadlaha
Bogga ugu weyn Ingiriisiga loogu talagalay Qaxootiga, Asleyr, SIV, iyo Dhibanayaasha Ka ganacsiga dadkaAdeegyada Taageerada
Markaad ku cusub tahay dalka Mareykanka, barashada Ingiriisiga waxay kaa caawin kartaa inaad ku xirto gurigaaga cusub iyo bulshadaada cusub. Hadafkayagu ee BeI waa inaan kaa caawino inaad ku guuleysato riyadaada Mareykanka oo aad uga gudubto wixii carqalad ah adiga oo ku siinaya mid ka mid ah aaladaha ugu awoodda badan - isgaarsiinta. Waxaan ku baraynaa Ingiriisiga aad ugu baahan tahay bulshada iyo shaqada. Haddii fikradda qaadashada fasalka Ingiriisiga aysan u muuqan wax macquul ah, tixgelin adeegyada taageerada aan bixinno si ay kaaga caawiyaan gaarista yoolalkaaga.
Helitaanka shaqada waxay noqon kartaa mid culeys badan, gaar ahaan markaad ku cusub tahay Mareykanka. Lataliyahayaga Ardayga ayaa halkan u jooga inuu kaa caawiyo oo kaa caawiyo dhammaystirka tallaabooyinka lagu dhammaystirayo jidkaaga shaqada. Mararka qaarkood tani waxay ka dhigan tahay sii wadida shaqadaada dheer ee halkan Mareykanka. Waqtiyada kale, waxay ka dhigan tahay in la helo yool shaqo oo cusub. Adeegyadayaga Talo Bixinta waxay naga caawin karaan ogaanshaha fursadaha tababarka, dib u bilaabaan qorista, fasalada luqadda Ingiriisiga, fasalada xirfadaha shaqada, iyo inbadan!
Adeegyada Lagu daro
BEI waxay bixisaa xanaano caruur inta lagu jiro waqtiga fasalka, si ay Hooyo iyo Aabe u sii wadaan barashada Ingiriisiga inta caruurta la daryeelayo.
Waxaa laga yaabaa BEI inay noqoto bixiyeha luqaddaada, laakiin miyaad ogeyd inaan kaa caawin karno inaad ka hesho ilo kale bulshada dhexdeeda? Markaad tahay arday ka tirsan BEI, waxaad qayb ka tahay shabakad taageero badan leh. Ha ka waaban inaad wax na weydiiso. Waxaan kuu gudbin karnaa bixiyeyaasha kale ee Adeegga Qaxootiga si aad u hesho taageerada shaqada, baahiyaha guriyeynta, diyaarinta GED, iwm Waxaan sidoo kale sameynay sanado badan oo shabakadaha bulshada sidoo kale. Hubso inaad la kulanto lataliyaha ardayda ee BEI si aad waxbadan uga sii ogaato.
Dhamaanteen waxaan nahay bartayaasha luqadda waxaanna ognahay waxa ay dareemeyso noqoshada bartayaasha. Waqtiyada loo baahdo, shaqaalaheena kala duwan iyo macalimiintayada ayaa kaa caawin kara afkaaga hooyo. Waxaan haynaa taageero luqadeed oo ah Carabi, Shiine, Farsi, Faransiis, Hindi, Jarmalka, Gujarati, Jabaan, Kazakh, Kinyarwanda, Kirundi, Kuuriyaan, Kurdi, Boortaqiis, Punjabi, Roomaani, Ruush, Serbo-Croatian, Pashto, Isbaanish, Sawahili, Tagalog. , Turkiga, Urdu, Fiyatnaamiis, iyo Yusbuuq.
Markaad u guurto magaalo cusub, mararka qaarkood waxay qaadataa waqti in la barto dariiqyada oo lagu helo sahamin raaxo leh. Sidaas darteed, waxaan bixinaa inta badan fasaladayada u dhow gurigaaga, meel sahlan oo loo lugayn karo. Haddii aad ku qanacsan tahay gaadiidka dadweynaha, waxaad awoodi kartaa inaad fasal ka dhigato kambuyuutarkeena. Calaamadaha baska ayaa loo heli karaa ardayda inay yimaadaan BeI, hadba sida loogu baahdo.
Dalbashada Jinsiyadda Mareykanka?
BEI waxay ka caawisaa gudbinta macaamiisha u qalma koorsooyinka udiyaar garowga Jinsiyadda Mareykanka ee CCT Houston.
Fasallada waxaa loogu talagalay bartayaasha Ingiriisiga waxayna diiradda saaraan u diyaarinta ardayda wareysiga Naturalization, Ingiriisiga iyo imtixaanka taariikhda Madaniga / Mareykanka. Ku celceli wareysiga, imtixaanka, oo baro Ingiriisiga oo u baahan guul. Dhammeysteyaasha guuleysta waxay kaloo fursad u helaan kaalmadda xagga sharciga iyo wakiilnimada habka qaadashada dhalasho ee Hay'adaha Samafalka Katooliga.
La xiriir cynthia@ccthouston.org
Codso macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Koorsada Diyaar Garowga Dhalashada
Fadlan qor 2 si aan u ogaano inaad run tahay
Tabaruc nala shaqee!
Casharka Barashada Luqadda Ingiriisiga ayaa ah goob runtii caalami ah oo leh fursado lagula dhaqmo dhaqamada kaladuwan ee guriga ama u safraya adduunka barashada iyo la kulanka dadka cusub. Haddii aad xiiseyneyso waxbarista guriga ama aad safar dibadeed, BEI waxay kaa caawin kartaa tababarka loo baahan yahay si aad u noqoto xirfadle Macallin Luqadda Ingiriisiga ah.
Barnaamijkeena Tababbarka Macallimiinta Tabaruca ah ayaa loogu talagalay in lagu caawiyo musharraxiinta inay noqdaan kuwa ku guuleysta macallimiinta Luqadda Ingiriisiga iyagoo bixinaya:
Tilmaamaha iyo tabaha aasaasiga ah ee Waxbarista Luqadda Ingiriisiga oo wax ku ool ah.
Baridda qaababka si loogu hawlgeliyo ardayda da 'kasta iyo heerar kasta.
Maamulka fasalka iyo istiraatiijiyadaha casharka ee heerarka kala duwan.
Hawlihii ugu dambeeyay ee Isbeddellada EL, Barashada Isku-dhafan, iyo istiraatiijiyad wada-xiriirka.
Khibrad shaqo oo macquul ah oo loogu talagalay macallimiinta cusub ee EL ee xiiseeya wax-baridda guriga iyo dibedda.
Markaa haddii aad ka fikireyso meheradda barashada Luqadda Ingiriisiga, waxaad u baahan tahay inaad dhammaystirto cilmigaaga, ama aad rabto uun inaad safar gasho oo aad adduunka oo dhan ka shaqayso, la xiriir shirkadda BeI si aad u bilowdid meheraddaada EL.